३३ केजी सुन तस्करी काण्डमा ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, को-को परे ? (सूचीसहित) « Deshko News
३३ केजी सुन तस्करी काण्डमा ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, को-को परे ? (सूचीसहित)
साढे तेत्तीस किलो सुनको तस्करी प्रकरण र सनम शाक्यको हत्या सम्बन्धमा आज ६३ जनामाथि जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
आपराधिक समूह स्थापना, सञ्चालन गरी सुनचाँदी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्यज्यानसम्बन्धी उनीहरुमाथि छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
छ जना पूर्व तथा वर्तमान प्रहरी पदाधिकारीमाथि सुनचाँदीको अवैध कारोवार सम्बन्धमा, छ जनामाथि ज्यान मुद्दा, १३ जना विमानका कर्मचारी र तीन जना सुन व्यापारी गरी २९ जनामाथि मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
गत माघ ७ गते दुवईबाट तस्करहरुले ल्याएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौँबाट हराएको थियो ।
हराएको सो सुन बेपत्ता पारेको भनेर तस्कर समूहमाथि मोरङको उर्लाबारी बस्ने सनम शाक्यलाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप छ । उनको शव विराटनगरमा गत फागुन १८ गते एउटा गाडीमा फेला परेको थियो ।